Sida loo Travel Ammaan Inta lagu jiro dillaacay Coronavirus | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sida loo Travel Ammaan Inta lagu jiro dillaacay Coronavirus
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 08/01/2021)
The dillaacay Corona ayaa sabab weyn oo ka mid ah walaac dadka adduunka oo dhan, laakiin waxaa laga yaabaa mid ka mid ah arrimaha ugu weyn waa in dadka musaafiriinta ah soo food saartay. Sababtoo ah qorshooyinka safarka way adagtahay in la beddelo oo tikidhada badanaa horay ayaa loo sii ballansaday, waxaa laga yaabaa in dareen dheeraad ah si aad u sii wado qorshaha aad halkii la kansali. Haddii aad doorato in sidaas la sameeyo, faa'idaystaan ​​talooyinkan si ay u hubiyaan in aad si ammaan ah u safraan inta lagu jiro dillaacay Corona iyo aad u hesho oo dhan Corona updates ugu dambeeyey.
Rail Transport waa Eco-Friendly iyo nabadgelyo badan Jidka Si Safarka. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
First, waxa ay dhab ahaan waa Coronavirus? Waa nooc ka mid ah fayruska ka kooban yahay xanuunada neefsashada sida Bariga Dhexe Respiratory Syndrome (MERS) iyo Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Buugga cusub ee 'Coronavirus' ee sannadkan waxaa lagu magacaabaa COVID-19 waxaana la rumeysan yahay inuu asal ahaan ka soo jeedo gobolka Hubei ee dhul weynaha Shiinaha, magaalada Wuhan. Waa cudur aad u faafa oo leh calaamadaha hargabka, oo ay ku jiraan qandho, cune xanuun, qufac, iyo sanka oo dareera ah. Tan iyo markii ay marka hore si ay aqoonsi u yimid in January, cudurku fido inta badan Asia iyo dunida inteeda kale ee, dalalka saameeya sida Japan, South Korea, Italy, Maraykanka, iyo Iran. Taasi waxay sababtay in xayiraad safarka ama talooyin safar ah in meelo badan, in kastoo qaar badan oo wali macne safarka.
Sida loo Travel Ammaan Inta lagu jiro dillaacay Coronavirus?
Iyadoo Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ayaa ka digay safarka qolaalka aan kuwa dalalka aadka u saamaysay, badan oo adduunka ah ayaa la arkay koobnayn, haddii kiis kasta. The Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa loo arko COVID-19 ah Emergency Public Health of International Concern halkii caamka ah, taas oo macnaheedu yahay waxaad kala socon kartaa on wuxuu la jiraa kuwa qorshyaasha safarka Haddii aad si taxaddar leh. Just qaadato daryeel dheeraad si ay u ilaaliyaan caafimaadkaaga isticmaalaya talooyinkan:
tip 1: Hel All Tallaalada Your
Iyada oo ay tani u ekaan kartaa cad, waxaa muhiim ah in hubisaa in aad heysato tallaalada oo dhan ka hor inta laga bilaabo safarka aad. Si aad u ogaato waxa darbo aad u baahan tahay ka hor inta aadan u tagaan, hubi bogga internetka ee CDC ee macluumaadka caafimaadka. In la hubiyo in aad ka dhawray sida cuduro badan laga hortegi karo sida ugu macquulsan waa furaha in ay ku ekaadaan difaaca xoog leh.
tip 2: Keena jeermi-tirtirta
Qaar ka mid ah ka dillaacay ugu xumaa ayaa lagu arkay goobaha la xiriir dhow, sida markab safar ku karantiilay Diamond Princess ee Japan, oo hadhaagii qotoma oo kaliya ka baxsan Tokyo. Haddii aad sidoo kale u safraya id ah rakaab kale oo badan, sida diyaarad, Hubi in la si aad nadiif aagga. Keena iyo masarka bakteeriyada iyo nadiifi meesha aad degan tahay, marka aad timaaddo. Tan waxaa ku jira isagoo tirtira armrests aad, cupholders, miisaska saxaaradda, iyo aag kasta oo aad dagi doontid.
tip 3: Xafid Hands Nadiif Haddii aad rabto in aad Travel Ammaan Inta lagu jiro dillaacay Coronavirus
Iyada oo dad badan oo isku dayaya in ay wadid cad ee fayraska via waji, dhab ahaan, dhakhaatiirta helay kuwa yar waxba si aad u ilaaliso caafimaadka. halkii, gacmo-dhaqashada inta badan waxaa lagu ogaaday in inta badan wax ku ool ah caafimaad. Haddii aad u socoto meel halkaas oo aad si joogto ah ma awoodi doonaan in ay ku dhaq gacmahaaga, keeno nadiifiyaha gacanta halkii iyo waxa ay si joogto ah u isticmaali.
In isla xididka this, gacmahaaga sii off wejigaaga, oo iska afkaaga iyo indhaha ka. Kuwanu waa meelaha halista sare si aad u hesho caabuq.
tip 4: Hel Caymiska Travel
Haddii aad tahay US-based, badan oo kaararka deynta bixiya dhisay- caymiska safarka, in kastoo aad u baahan doontaa in la tasho saaraha card si loo arko haddii Coronavirus dillaacay cusub waxaa lagu daboolayaa. Waayo, mid kasta oo kale oo, si kastaba ha ahaatee, aad u baahan doontaa in caymiska safarka iibka haddii xaaladood oo la xaqiijiyay of virus bilaabaan soo boodaya oo fidsan laakiinse dalka aad safarka.
tip Tani waxay sidoo kale u waasiciyo in safarka celin, sida tigidhada tareenka, hotels, iyo tours. Inkasta oo laga yaabaa in ay ku kici ku wehlin doona oo dheeraad ah si buugga, dabacsanaan ku qabo qorshaha safarka celin bixin kartaa off weyn ay dhacdo la joojiyo.
tip 5: Fogaadaan Dadwayne!
Khubarada caafimaadka ayaa ka digay in faafo virus via xiriirka bulshada, taas oo macnaheedu yahay waa inaad ka fogow meelaha isugu intii macquul ah. Tani waxa ay yaraynaysaa aad gaadhista dadka buka. Dabcan, soo jiidashada dalxiiska ha u muuqdaan in ay soo jiidan dadkii badnaa, laakiin waa in weli waxaad awood u Booqashada xilliyada off-peak marka martidu ay ku yar yihiin. Meelaha sida Paris, Tani micneheedu waa laga yaabaa in booqashada Louvre ee furitaanka museum ama wax yar ka hor ku dhow halkii dhexe ee maalinta danbow gaadiidka dalxiiska.
Dabcan, waxaa laga yaabaa in aan macquul aheyn in ay ka fogaadaan oo gebi ahaanba dadkii badnaa, gaar ahaan ciidaha. Inkasta oo inta badan Europe ayaa si firfircoon la joojiyay xaflado sida Italy ee Carnivale iyo xataa EXPO Mobile World Congress ee Spain.
tip 6: Is ogow naftaada
Safarka waa duulaan, aynu wada ognahay in. Si kastaba ha ahaatee, dabeecadda go-xawaaraha sare ee safarka micnaheedu ma aha in aad u baahan tahay in uu ordo naftaada foorjeeyey. Waxay u muuqan kartaa racfaan in uu toosaa at crack waaberiga iyo madax ka baxay ilaa habeenbadhkii ayuu la soo dhaafay, laakiin waxaa muhiim ah in aad hubiso in aad naftaada daryeesho iyada oo dhan madadaalo ah. maxaad? Maxaa yeelay hurdo ku filan iyo cunto caafimaad leh macnaheedu jirkaaga iskaga difaaci karo cudurrada. Tani waa gaar ahaan muhiim u ah kuwa waxaa laga baqaa in cudurada, sida dadka waayeelka ah ama kuwa qaba qaabka difaaca jirka ka kooban.
Safarka Ammaan lagu guda jiro dillaaco Coronavirus The – Line hoose
Inkasta oo ay jiraan dhab ahaan waa ay walwal ku tahay kuwa jaale safarka lagu guda jiro waqti this, waxaa jira siyaabo aad u safarto si ammaan ah lagu jiro dillaacay Corona ah. The COVID-19 faafa, laakiin dalal badan oo aanan weli la saameeyeen oo weli ammaan u ah safarka. Haddii aad qorsheyneyso inaad sii wado fasaxaaga, isticmaali tallooyinkan si aad naftaada u ilaaliso caafimaadka. Hubi in aad hurdo ku filan oo si fiican u cuni, hesho dhammaan tallaallada aad u baahan yahay, nadiifi meelaha aad ku dhawaad ​​la dile, iyo sii qorshyaasha safarka aad dabacsan. Iibso caymiska safarka iyo fogow meelaha isugu intii macquul ah, iyo wax kasta ka sarreeya sii war. Sii naftaada si dhab ah loo diyaariyey in ay dhacdo Coronavirus arbushin dillaaca up ee dalka.
Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay u safraan si ammaan ah lagu jiro dillaacay coronavirus waa via tareenka – raaxaystaan ​​habboonaan iyo badbaadada safarka tareen iyo isticmaalka Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Sida loo Travel Ammaan Inta lagu jiro dillaacay Coronavirus?” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-safely-coronavirus%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de si / TR ama / es iyo luuqado badan.